चितवन भरतपुरको निषेधाज्ञाको दोश्रो दिन, यस्तो देखियो फोटोमा ! – Saurahaonline.com
चितवन भरतपुरको निषेधाज्ञाको दोश्रो दिन, यस्तो देखियो फोटोमा !
सौराहा अनलाइन | २०७७, ३२ श्रावण आईतवार
चितवन : स्थानीय प्रशासनले शुक्रबारराति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि भरतपुर महानगरपालिका भित्र निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा यहाँका उद्योग, कलकारखाना, बजार तथा यातायात न्यून मात्रामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भरतपुर महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । एकाएक कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि चितवनको भरतपुर महानगर क्षेत्रमा हिजोदेखि एक सातासम्म निषेधाज्ञा सुरु भएको छ । निषेधाज्ञाको आज दोश्रो दिन । पूर्वीमा गोन्द्रगंदेखि चौविसकोठी, सहिदचोक, पुल्चोक, आँपटारीमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
निषेधाज्ञाले नारायणगढ–भुरतपुरको सार्वजनिक जनजीवन ठप्प छ । बजार पूरै बन्द छ भने कोही पनि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । सडक सुनसान छ । सडकमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीहरु तीन तहकै देखिएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली सडकमा देखिन्छन् ।
३४ वर्षदेखि फरार पक्राउ २०७७, १२ आश्विन सोमबार
कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु २०७७, १२ आश्विन सोमबार
राष्ट्र बैङ्कद्वारा आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु २०७७, १२ आश्विन सोमबार
प्रदेश प्रहरी प्रमुख अर्याल कोरोना संक्रमण मुक्त २०७७, १२ आश्विन सोमबार
चितवनमा डिएसपीसहित ८ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि २०७७, १२ आश्विन सोमबार
चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमण २०७७, १२ आश्विन सोमबार
सिन्धुपाल्चोक : आफ्नै गाउँका एक जनाको हत्या गरी फरार भएका लिशङ्खुपाखर गाँउपालिका–७ का एकजना ३४ वर्षपछि पक्राउ.....
पर्यटकको पहिलो रोजाई सौराहा
ब्याजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिंदै सहकारी
देउवा र इतर पक्षबीच अझ दूरी बढ्ने
चितवनमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रका दुई बिओपी स्थापना